PressReader - Kwayedza: 2018-11-23 - Murimi gara wagadzirir­a
Murimi gara wagadzirir­a
Kwayedza - 2018-11-23 - Maonero Edu -
BAZI rinoona nezvemamir­iro ekunze, reMeteorol­ogical Services Department (MSD), rinozivisa kuti mvura inotarisir­wa kutanga kunaya yak aw and a ku ma tun hum azhinjieny­ikakuv am ban emu si we Ch is ha nu chino zvichienda mberi. Kunaya kwemvura iyi yakawanda zvinogona kureva kutanga kwemwaka weZhizha nekudaro varimi vanotarisi­rwa kutanga kudyara mbesa dzavo dzakasiyan­a, kusanganis­ira chibage.
Murimi akangwara pari zvino akatogadzi­rira kare kuburikidz­a nekutenga zvinodiwa pakurima sembeu, mafetireza nemishonga yacho.
Kugara murimi akagadziri­ra zvinobatsi­ra mukuronga basa rake nenguva pane kuzomhanya-mhanya nguva yapera.
Vamwe varimi vakatorima minda yavo kare zvekuti chavangomi­rira bedzi kuti mvura ichingotur­uka, votodyara.
A si ku nev am wewo va chi ri ku to ts va ga mir o mo ye kui sap am age jo panguvaino­uyez vi rip a chen a kuti vakadai av av ari mumashure menguva.
Kune vamwewo vasina chokwadi chekuti mwaka uno vorima here kan akut iv ore gaz vic hit ever am ashokoanot­imv ur ainog on a ku sh omeka nekuda kweEl Nino. Vanamazvik­okota vezvemamir­iro ekunze vanoti kazhinji kacho, El Nino inokonzera kuti mvura inaye iri shoma.
Nyanz vii dz i dz inotizvak are chikamuc he 62 percent che El Ni no y aka mboi ti kama korea da rik a,mvu ray aka nay a irish om amuZim ba bwe,izvo zvakaita kuti nyika ino iwane mvura ine chikamu che40 percent.
Asika, hazvirevi kuti kana kukanzi kune El Nino murimi obva akanda bad za rake ku re ore ga ku rim a. Ti no dar one ku ti k uri mandiwo mu sim bo ti webudiriro yeupfumi hweZimbabw­e uye kuti maindasiti­ri asimukire, zvose zvinobva mukurima. Nekuda kwemamirir­o ezvinhu ekuti mvura inog on a ku sh omeka,zv ave ku re va ku tip a nod ak us hand iswahungwa ru a po mu rim ian or imam be s ad zinokasika­kuibv au ye dz i not iv ir ira muzu va. Imwe nzira kusiyanisa mbesa pakudyara. Hazvina huchenjeri kurega kurima zvachose nekuti zvinogona kuitika kuti mvura inobva yanaya yakawanda, vaya nyope vofuma mangwana vozvidemba. Mwari voga nd ivo van oz iv am am ir iro ch aiwo an eng ea kai tamw aka mum we ne mum we kun yang wezvazv oz vakak os hawokut eve dz era ku ru dzi roi no pihwa nenyanzvi dzinoona nezvemamir­iro ekunze. Pakadai apa panoda kuti mu rim ia sh an den eva rim isika na ku tim ad hum e ni emu dunhu rake ku it ira ku tia pihw em aza no marin gene mb eu dz akako dz er au ye dz inoc him bid zakuib va. Iz viz vakako shane ku tim atunhu an osiy ana man airoanoi ta mvura, kupisa nezvimwe zvakadaro izvo zvinoita kuti pavewo nemusiyano zvakare wembeu dzinofanir­wa kurimwa.
Nhasiu nov eruzhinj iv ari ku chem az vi ku run ekudak we ku kw irak wait a mitengo yezvinhu zvinosanga­nisira mafuta ekubikisa uye zvinhu izvi z vin odzika machete k ana pak ave ne bu dir ir oh ur u mu n ya ya dzek uri ma.
Pasipec hi rongw ache ku van du dz au pf umih we Zimbabwe, che Transition­alSta bili sat ion Programme, bu dir ir o mu n ya ya dzek uri mai no one kw a sehwaro hwakakosha zvikuru mukusimudz­ira nyika ino.
Nyika ino kare yaizivikan­wa sedura rechikafu mudunhu rose reSadc uye hapana chinotadzi­sa kuti idzokere pachidanho ichi kana pakava nekushanda nesimba uye mushandira­pamwe pakati pevarimi, Hurumende nemamwe mapoka akasiyana.
M uri mic haiy eh aatiz wen emw aka a si ku tia now a ni kw a aka ga dz ir ira.